Tian’ilay Tovolahy Yemenita Hahafantatra Ny Fomba Nanovan’ny Ady Ny Fiainany Ianao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Avrily 2016 15:47 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Deutsch, македонски, Español, عربي, Ελληνικά, English
Bilal sy Ahmed Sary: Ahmed Algohbary
Ity lahatsoratra nosoratan'i Ahmed Algohbary ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny PRI.org tamin'ny 25 Martsa 2016, ary navoaka teto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Tian'ilay tovolahy Yemenita hahafantatra ny fomba nanovan'ny ady ny fiainany ianao. Mahavaky fo ny fandraisam-peony maharitra roa minitra.
Tamin'ny 26 Martsa 2015, nanomboka hetsika daroka baomba tao Yemen ny firaisamben'ny tafika an'habakabaka notarihin'i Arabia Saodita. Natao handresena ireo tafika mpikomy nifehy ny faritra maro tao amin'ny firenena sady nandroaka ny governemanta nankatoavin'ny iraisampirenena izany.
Satria efa akaiky ny tsingerintaona voalohan'ny ady an'habakabaka, nanatontosa ity fandraisam-peo ity i Ahmed Elgohary, Yemenita mpianatry ny oniversite. Tantaran'ny namany akaiky azy indrindra, Bilal izany, izay namoy ny ainy tao anatin'ny daroka baomba an'habakabaka Saodiana tamin'ny 20 Aprily 2015. Nanoratra ny tantara tamin'ny teny anglisy i Ahmed ka afaka mahazo izany ny Tandrefana. “Hafatro manan-danja indrindra tamin'ny zava-mitranga tao Yemen izany,” hoy izy.
She said, “Ahmed, Bilal is dead.”I said, “What?” I was in a very big shock.
Miarahaba. Ahmed Elgohary no anarako. Avy ao Yemen, Dhamar City aho. Hiresaka momba ny namako akaiky ahy indrindra, antsoina hoe Bilal aho.
Manana namana akaiky indrindra azy ny olona tsirairay eto amin'ity fiainana ity. Olona mahalala ny tsiambaratelonao rehetra. Olona iresahanao isan'andro. Olona afaka mampitsikitsiky anao foana? Bilal no namana akaiky ahy indrindra.
Niara-nilalao baolina, niserasera tamin'ny aterineto, nijery sarimihetsika sy niara-nandeha tany an-tsekoly izaho sy i Bilal. Fantatr'i Bilal foana ny fomba hampitsikiana ahy. Nanova ny fiainako izy ary nahatonga ahy ho olona tsara toetra kokoa.
Telo taona lasa izay, nankany an-drenivohitra, Sana'a i Bilal mba hianatra any. Tamin'ny herintaona, nanomboka nidaroka baomba ny fireneko mahafinaritra, Yemen, i Arabia Saodita.
Tamin'ny 19 Aprily 2015, nankany Sana'a aho mba hihaona amin'ny namako, Bilal. Nitondra azy tany amin'ny fisotroana kafe aho. Nitafatafa tsara izahay. Avy eo, niverina nody tany an-tranoko aho, ary nankany an-tranon'ny dadatoany kosa i Bilal. Nikendry ny tendrombohitra Faj Attan ny fiaramanidina Saodiana. Izany no fipoahana goavana indrindra. Vaky ny varavarankelin'ny tranoko. Ora telo taty aoriana, naharay antso avy amin'ny renin'i Bilal aho.
Hoy izy hoe: “Ahmed, Bilal dia maty.” Hoy aho hoe: “Inona?” Aho tamin'ny fomba tena lehibe taitra. Hoy izy hoe: “Saodiana namono ny zanako.” Ary izy dia nitomany. Nitomany aho, koa. Tsy tena mino hoe: namako akaiky indrindra novonoin'ny Saodiana rivotra fitokonana. Bilal dia iray amin'ireo olona maro no maty noho ny ady tamin'ny Yemen Saodiana.
Hoy izy, “Ahmed, maty i Bilal.”
Hoy aho, “Inona a? Tena taitra mafy aho.
Hoy izy, “Novonoin'ny Saodiana ny zanako lahy.” Ary nitomany izy. Nitomany ihany koa aho. Tsy nety nino aho fa novonoin'ny daroka baomba an'habakabaka nataon'ny Saodiana ny namako akaiky ahy.
Iray amin'ireo maro namoy ny ainy noho ny ady Saodiana tao Yemen i Bilal.
Tsy ho adinoko mandrakizay ny fiarahanay mijery andian-tantara ‘Game of Thrones’ na “Lalaon'ny Seza Fiandrianana” isan'andro sy mandihy ary mihira tao amin'ny efitranony.
Manantena aho fa hifoha indray andro any ary ho tapitra ny ady.
Ho an'ny mpiara-dia amin'ny Saodiana ny hafatro : Miangavy aho, atsaharo ny famonoana olona. Manan-janaka izahay. Olombelona tahaka anareo izahay. Tsy kilalao izany.
Hafatra hafa ho an'ny Royaume-Uni: Miangavy, atsaharo ny fivarotana fitaovam-piadiana amin'i Arabia Saodita.
Ary amin'izao fotoana izao ihany koa, misidina ambonin'ny ao an-tanànako ny fiaramanidina mpiady Saodiana.